Madaxweyne Cali C/laahi Cosoble oo runta u sheegay xildhibaanada xiisadda ka wada Jowhar – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Cali C/laahi Cosoble oo runta u sheegay xildhibaanada xiisadda ka wada Jowhar
Madaxweyna maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble oo haatan ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Jowhar, halkaas oo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi ay si weyn uga soo horjeesteen wasiiradii uu dhawaan soo magacaabay.
Madaxweyne Cali C/laahi Cosoble ayaa sheeegay in golaha wasiirada uu dhawaan soo magacaabay ay ku yimaadeen kadib markii uu la-tashiyo badan la sameeyay xildhibaanada Hirshabeele iyo kuwa federaalka Soomaaliya.
Wuxuu madaxweyne Cosoble caddeeyay in hadii tabasho ay jiraan lagu sixi karo wada-hadal, balse aanay habooneyn in xildhibaanadaasi ay warbaahinta ka naqdiyaan wasiiradda uu soo magacaabay.
Madaxweyne Cosoble ayaa dhinaca kale ka digay in lagu mashquulo is-cambaareyn, isagoo sheegay in beeshii aan helin wasiiro ay heli doonaan jagooyin kale, sida agaasimo guud, laakiin aysan suurtagal ahayn in cid kasto wasiir laga dhigo.
“Sax ma ahan xildhibaanka hadii uusan noqon wasiir inuu kasoo horjeesto xukuumadani, xildhibaano mudnaa wasiiro iyo wasiir ku-xigeeno inay helaan way jiraan, oo waxaan u hambeeynay in shaqada baarlamaanka ay sii wadaan oo ay hogaamiyaan guddiyada joogtada ee baarlamaanka, beesha aan helin wasiiro waxay heli doonaan jagooyin kale sida agaasimaha guud, suurto-galna ma aha in cid kastaa wasiir laga dhigo.” Sidaas waxaa yiri madaxweynaha Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble ayaa imaanaya xilli xildhibaanada baarlamaanka maamulkaasi ay magaalada Jowhar ka wadaan olole xoogan oo ay kaga soo horjeedaan magacaabista wasiirada cusub uu dhawaan madaxweynaha maamulkaasi soo magacaabay.